Acts 13:38 wuxuu ku dhawaaqey “marka, walaalayaal. Waxaan rabaa inaad ogaataan In Ciise fadligiisa, waxaa leydiin ku yaboohay cafis”
Erayga “cafis” macnihiisu waa sida looxa oo la nadiifiyey; Danbi dhaaf, deyn la daayey. Markaan qof qalad ku sameynno, waxaan raadinaa cafiskooda si xiriirkii loo soo celiyo, cafis lama hubo oo mudnaan laguma helo, qofna ma mudna in la cafiyo, cafisku waa ficil jaceyl, naxaxiis iyo dulqaad. Cafisku waa go’aan inaadan wax caloosha qof kale ugu qaadin, wax kasoo ay kugu sameeyeen.
Baybalku wuxuu noo sheegayaa inan annagoo dhan cafis uga baahannahay ilaahay, annagoo dhan dambi baan gallay, Ecclesiastes 7:20 wuxuu sheegayaa, ma jiro nin/qof toosani aduunka/dhulka oo sameeya wax saxa oo aan dambaabin,.” 1 John 1:18 wuxuu leeyahay, ; haddaan ku anddacoonno inaanaan dambi lahayn, nafteennaan khataleynaa/sireynaa, runtuna naguma jirto. “ Dambi oo dhan ugu dambeyntii/aakhiritaanka waa ficil alle looga horjeedo/mucaaradayo (Psalm 54:4) natiijo ahaanna, waxaan aad ugu baahannahay cafis ilaahay, haddaan danuubtayada la cafin, waxaan weligayo ku jireynaa dhibatada ay na dhaxalsiiyey dunuubteenna (Mathew 25:46; John 3:36).
Cafis—Sideen ku heli karaa?
Alxumdu lilaah, Ilaah wuu jacayl iyo naxariis badanyahay, wuu jecel yahay inuu noo dambi dhaafo, 2 Peter 3:9; wuxuu noo sheegayaa, “ wuu noo dulqaataa, mana doonayo in qofnna baaba’o, laakiin qof walbo toobad keeno, ilaah wuxuu rabaa inuu nacafiyo, sidaas wuxuu ku baxshay cafiskeenna.
Ciqaabta keliya xaqa ah oo dembigeennu waa geeri. Nuska/barka hore ee Romans wuxuu sheegayaa. “ iney abaalka/mushaarka dambigu yahay geeri, geeri waartaa waxaan ku helnay dunuubtayada, ilaah, qorshihiisa toosan, wuxuu noqday banii adam- Ciise Masiixi (1:1; 14), Ciise wuxuu ku dul dhintay macatabka, waxuuna qaatay xukunkii/ciqaabtaan muteysanay- geeri. 2 Corinthians 5:21 wuxuu na barayaa, `” Ilaahay wuxuu ka dhigay midaan dembi lahayn sii dambi noogu noqdo, sidaa darteed inaan isaga sax u noqonno bey noqon. Ciise wuxuu ku dul dhintay macatabka, asagoo qaadanaya waxaan muteysaney, ilaah ahaan, Ciise geeridiisu waxay bixisey cafis dunuubta dunidoo dhan. 1 John 2:2 waxay sheegeysaa, wuxuu yahay naf hurid toobad dalab ah. Oo aan annaga keliya ahayn ee weliba weliba dunuubta dunidoo dhan. Ciise geeriduu ka soo kacay, kuna dhawaaqay inuu ka adkaaday/guuleystey dembi iyo geeri (1 Corinthians !5:1-28) amman ilaahey, geerida iyo dib u soo noolaanta ciise masiix, nuska/barka labaad oo Romana 6:23 waa run, “ laakiin hadiyadda ilaaheey waa nolol abid ah oo lagu helayo allenimada ciise masiix.
Ma doneysaa in danuubtaada la cafiyo? Ma dereemeysaa is ciilkaambi/ inaad dambi gashay oo aad moodid inusan tageyn? Dambi dhaaf waa kuu diyaar haddad u rumeysid ciise masiix inuu badbaadidiyahaaga noqdo. Ephesians 1:17 wuxuu leeyahay, soo laabasho baan isaga iyo dhiigiisa ku heleynaa, dembi dhaaf, sida ku xusan ganinimada sarreynta ilaahay, Masiix deymankayagii buu guday, si naloo cafiyo, waxaa oo inaad sameyso yahay, weydiiso ilaahay inuu ku cafiyoo ciise dartiis, adoo rumeynayaa inuu ciise u dhintay si uuu u gudu/baxsho cafiskaaga, wuuna ku cafin doonaa! John 3:16-17 wuxuu ka kooban yahay fariintan cajiibka ah, siduu ilaah aduunka u jecel yahay, waxuu baxshay wiilkiisii, wiilkiisii keliya ahaa, si qof kasta oo rumeeyaa uusan baabi’i doonin, laakiin uu nolol waarta heli doono, ilaaheey wiilkiisa umguma soo dirin dunida inuu dhibaateyo, cambaareeyo/ xukun adag ku rido, laakiin inuu isku badbaadiyo”
Haa, sidaasuu u sahlan yahay, kama ka shaqeysan karttid cafis ilaahay, cafis alle kama gadan kartid. Waxaad ku heli kartaa oo keliya iimaan allaha weyn naxariistiisa. Haddaad rabtid inaad Ciise Masiix oggolaatid inuu noqdo badbaadiyahaaga, kana heshid cafis ilaahay, waatan duco aad ku duceysan kartid, dhihidda ducadan iyo doco kale toonna kuma badbaadin karaan. Ciise Masiix oo aad rumeysaaa waa tan kaliya oo ku siineysa dunuubta oo lagaa cafiyo. Ducadani waa hab/qaab/jid keliya oo aad alle ugu sheegeysid saad u aaminsantahay, ugana mahad celineysid siduu kuu cafiyo. “ilaahow” waan ogahay inaan dambi kaa galay, astaahilana ciqaab, laakiin Ciise Masiix baa qaatay ciqaabtaabtaan astaahilay si imaanka aan ku qabo ciise la iigu cafiyo, Adigaan ku rumeeyey sii aan u badbaado. Waad ku madsantahay sarreyntaadda/sharaftaada cajiibka ah iyo cafiska! Amiin.